अनलाइन सेवा र चिनियाँ अनुभव - China Radio International
(GMT+08:00) 2017-01-17 16:16:15
सामाजिक प्रयोगकर्ताले सकेसम्म विवादित र चर्चित विषयलाई सेयर गर्दछन्। क्षणभरमै त्यस्ता समाचार हजारौँ सामु पुगिसकेका हुन्छन्। गगन थापाको बारेमा प्रकाशित समाचार पनि त्यस्तै भयो। एकअर्कामा सेयर हुँदै गएको समाचार गगन थापासम्म पुग्दा बजारमा राम्रै हल्ला पिटाउन सफल बनिसकेको थियो। समाचारले गगन थापाको व्यक्तित्व र सार्वजनिक जीवनमाथि मज्जाले धावा बोलेको थियो। नेपाली राजनीतिको युवापुस्तामा स्थापित र लोकप्रिय व्यक्तिलाई धरासायी बनाउने उद्देश्यले झुटा समाचार प्रसार गरिएको पुष्टि भएपछि हल्ला सुमसाम भयो।
छानबिनका क्रममा झुटो समाचार दिने अनलाइनले माफी मागेर साचार हटाउँदासम्म थापाको प्रतिष्ठामाथि सर्वसाधारणले औँला उठाइसकेका थिए। थापाले मुद्दालाई बढी चर्काउन चाहेनन्। यदि यो विषय नेपालमा नभएर अन्य कुनै मुलुकमा भएको भए सम्बन्धित अनलाइनले झुटो विवरण प्रकाशन गरेर कुनै व्यक्तिको मान सम्मान र प्रतिष्ठामाथि आघात पुर्‍याएको प्रमाणित हुँदा करौँडो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने थियो।
नेपाली अनलाइन संचारले कुनै पनि व्यक्तिमाथि कपोलकल्पित विवरण प्रकाशन गरेर उसको मानप्रतिष्ठमाथि धावा बोलेको यो पहिलो उदाहरण भने होइन। कहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको समाचारले हल्ला पिट्छ तर त्यो सत्य हुँदैन। विभिन्न ढङ्गले पूर्वाग्रही भएर बदला लिन अथवा कुनै एक राजनीतिक आडमा अर्को प्रतिस्पर्धीलाई गिराउनका लागि यस प्रकारका काम नेपाली अनलाइनले बारम्बार गर्दै आइरहेका छन्। यसो भनेर सबै अनलाइनलाई भन्न खोजेको चाहिँ होइन। पत्रकारिता आचारसंहितालाई पालन गर्दै व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्ने थुप्रै नेपाली अनलाइन संचारमाध्यम छन्। तर केही अनलाइनले गरेको कुकर्मबाट अनलाइन संचारमात्र नभएर तमाम पत्रकारितामाथि नै दाग लाग्ने काम भएको छ।
छ्यापछ्याप्ती खुलेका अनलाइनहरुले प्रयोगकर्ताको संख्या बढाउनका लागि अझै विवादास्पद विषयबस्तुको छनोट गरेको देखिन्छ। सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त बहन गर्दै खोजपत्रकारिता गर्ने हो भने समाजमा राम्ररी स्थापित भइन्छ भन्ने कुरा त त्यस्ता अनलाइनका संचालकलाई थाहा छँदैछ। तर उनीहरुसँग त्यस्तो काम गर्ने धैर्य छैन। एउटा कार्यालयसम्म नराखीकन एउटा ल्यापटपको भरमा झोलाबाटै अनलाइन चलाउनेहरुले समाजमा भएका विषयवस्तुलाई गम्भीर रुपमा खोजी गर्नका लागि आर्थिक तथा जनशक्तिको श्रोत जुटाउने कुरै भएन। अनि तातै खाउँ जली मरौँ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि कपोलकल्पित विषयवस्तुको सहारा लिने गर्छन्।
व्यक्तिको मर्यादामा आँच पुग्ने विषय बाहेक नेपाली अनलाइनमा अर्को त्यस्तै विकाउको विषय यौन रहेको छ। हुँदै नभएको घटना अथवा थोरै भएको विषयमा थपथाप गरेर बुट्टा भर्ने कामदेखि द्वयअर्थी शीर्षक राखेर पाठकलाई झुक्याउने काम भइरहेको छ। कुनै समाचारमा सम्बन्ध नै नभएको भद्दा र अर्धनङ्गन युवतीको फोटो राखेर सामग्री बिकाउ गर्ने धन्दादेखि समाजलाई भड्काउनेसम्मका विषयवस्तु राखेर केही अनलाइन संचारले यो क्षेत्रलाई नै बदनाम बनाइरहेका छन्। यसो हुनुको पछाडि नेपाली अनलाइनलाई अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्र नभएर नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
काम गर्दागर्दै गल्ती हुनसक्छ। तर बारम्बार गल्ती दोहोर्‍याउनु र नियतबस नै गल्ती गर्नु चाहिँ अपराध नै हो। केही अनलाइनको यस्तो नियतले गर्दा उच्च व्यावसायिक मूल्यमा काम गरिरहेका अनलाइनलाई पनि समस्या सिर्जना भएको छ। यही प्रशंगमा नेपाल सरकारले अनलाइन निर्देशिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि त्यसमाथि बहस हुँदैछ। यो लेखमा चाहिँ नेपालको छिमेकी मुलुक चीनमा इन्टरनेटको विकाससँगै बढेको अनलाइन संस्कृति र अनलाइन संचार अभ्यास कस्तो छ भन्ने बारेमा केही चर्चा गरिएको छ।
चीनमा अनलाइन संस्कृति
सन् 2001 मा चीनको सांघाईमा एशिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग संगठन एपेकको शिखर सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका औद्योगिक तथा वाणिज्य नेताहरु एक्काईसौँ शताब्दीको आरम्भसँगै व्यापार व्यवसायलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नका लागि इन्टरनेट अपरिहार्य रहेको भन्दै गम्भीर वहस गरेका थिए। शांघहाई एपेक शिखर सम्मेलन चलिरहेको हलदेखि करीब दुई सय किलोमिटरको दुरीमा रहेको हाङ्ग चौ शहरमा मा युन नामका एक जना चिनियाँ युवा एक विद्युत्तीय वाणिज्य वेभसाइटको संचालन गर्न निकै व्यस्त देखिन्थे। तिनै मा य���नले विकास गरेको अलीबाबा नामको वेभसाइटले अहिले न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सफलताका साथ स्टक बिक्री गर्न थालेको छ। ती चिनियाँ युवा मा युनलाई पश्चिमा देशहरुमा ज्याक मा भनेर चिनिन्छ।
सन् 2014 सेप्टेम्बर 19 तारिख विहान साढे नौ बजे अलीबाबा वेभसाइटले न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा पहिलो पटक स्टक बिक्री गर्न थालेको हो। सोही दिन न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जको अन्तिम कारोबार बन्द हुँदा अलीबाबाको कुल मूल्य करीब दुई खर्ब चालीस अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। अलीबाबा गुगलपछि विश्वको दोस्रो ठूलो इन्टरनेट कम्पनी बन्न सफल भएको छ।
सन् 2014 नोभेम्बर 11 तारिखमा 55 सेकेण्डभित्रै दस करोड चिनियाँ युआनको कारोबार अनलाइन मार्फत भएको थियो। चीनमा नोभेम्बर 11 लाई एकल दिवसका रुपमा मनाइन्छ। यो एक प्रकारको प्रेम दिवसको विपरीत दिवस हो। जोडी नभएर एकल जीवन बिताउन बाध्य भएका अथवा त्यस्तै चाहना राख्ने व्यक्तिलाई लक्षित गरेर अलिबाबाले सन् 2009 को नोभेम्बर 11 देखि एकल दिवसमा विशेष छुट दिन थालेको हो। एकल दिवसमा नोभेम्बर 11 नै छनोट हुनुको कारण चाहिँ यो दिन एघार महिना एघार तारिख भएर चारवटा एक अर्थात् वर्षभरिमा सबैभन्दा धेरै एक संख्या पर्ने दिन हो। त्यसकारण म एक्लै छु भनेर मनाइने दिवस हो एकल दिसवा अर्थात् सिङ्गल डे। यो दिन चिनियाँ अनलाइनहरुले धेरै छुट दिने गर्छन् जसको फाइदा जोसुकैले लिन सक्छ। सन् 2014 को नोभेम्बर 11 का दिन बिक्री भएका महिलाका भित्री पोशाकलाई एउटा थुप्रो बनाउँदा त्यस्को उचाइ सगरमाथाको भन्दा तीनगुना बढी हुने लोकप्रिय चिनियाँ अनलाइन सेवा थाउपाउले जनाएको छ। सन् 2013 को नोभेम्बर एघार तारिख थाउपाउको वेभसाइटबाट पैंतीस अर्ब चिनियाँ युआनको बिक्री भएको थियो। सन् 2014 को नोभेम्बर 11 तारिख थाउ पाउ वेभसाइटबाट सन्ताउन्न अर्ब दश करोड चिनियाँ युआनको बिक्री भएको थियो।
एकै दिनमा एउटै वेभसाइटबाट यतिको बिक्री हुने र लाखौँ मानिसले एकैचोटी वेभसाइटबाट सामान अर्डर गर्ने हुनाले कतिपय अवस्थामा वेभसाइटले काम गर्न नसकेर निस्क्रिय हुने अथवा अर्डर लिन नसकेर फेरि प्रयास गर्नुहोला भन्ने सन्देश बारम्बार आउने भएकाले चिनियाँहरु रातभर इन्टरनेटमा सामान अर्डर गर्न व्यस्त हुन्छन्। यो दिन 80 प्रतिशतभन्दा छुट हुने भएकाले यस्तो भएको हो।
सन् 2015 को सिङ्गल डे सुरु भएको दस घन्टामा अनलाइन मार्फत 8 अर्ब चिनियाँ युआनको कारोबार भएको थियो। सो दिनको पूरै कारोबार 50 अर्ब चिनियाँ युआन पुगेको थियो। सन् 2015 को नोभेम्बर 11 का लागि अनलाइन मार्फत अडर गरिएका सामानलाई डेलिभरी गर्न चीनमा 17 लाख व्यक्तिलाई खटाइएको थियो भने4लाख सवारी सामानबाट ढुवानी भएको थियो। पाँच हजारवटा वायर हाउस प्रयोग भएका थिए भने2सयवट हवाइजहाज सामान आपूर्तिमा प्रयोग भएको पिपुल्स डेलीले लेखेको छ। सन् 2015 को नोभेम्बर 11 को अफरमा प्रतिमिनेट सामान अर्डर गर्नेको संख्या एक लाख बीसहजार थियो। इन्टरनेट चलाउनेहरुमध्ये 73 प्रतिशतले मोबाइल फोनबाट अर्डर गरेका थिए। 12 घन्टाको अवधिमा सन् 2014 भरिको रेकर्ड9अर्ब 30 करोड अमेरिकी डलरलाई उछिनेको थियो। सुरुको एक घन्टामा2करोड 70 लाखवटा सामानको किनमेल भएको थियो। एकल दिवसको किनमेल अलिबाबाले सन् 2009 बाट मात्र सुरु गरेको हो।
इन्टरनेटको विकासमा चिनियाँ नीति
इन्टरनेटको विकासका लागि चीन सरकारले विभिन्न नीतिहरु सार्वजनिक गरेको छ। चीनले सन् 2007 मा विद्युत्तीय व्यापारको विकासम्बन्धी राष्ट्रिय र सरकारी रणनीति तय गरेको थियो। सन् 2009 मा3जी र सन् 2013 मा4जीको अनुमति पत्र वितरण गरेपछि चिनियाँ इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताको संख्या तीब्र रुपमा बृद्धि भएर विश्वको पहिलो स्थानमा पुगेको छ। हाल चीनले नयाँ सूचनाको आधारभूत प्रबन्धको निर्माण गर्न र आधुनिक सूचना प्रविधि व्यवसायको विकास गर्न प्रयास गरिरहेको छ। चीनका उद्योग तथा सूचनाकरण मन्त्री मिओ वैका अनुसार चीनले एक रणनीतिक परियोजनाको तर्जुमा गरेका छ। सो परियोजना अनुसार सन् 2015 को अन्त्यसम्म सहरी परिवारले प्रयोग गर्ने ब्रोड्ब्याण्ड बीस मेघाबाइट पुगेको छ। चीनले टेलिकम संचालक उद्योग-व्यवसायमा थप लगानी गर्ने र इन्टरनेटको प्रयोग शुल्क घटाउने नीति पनि बनाउँदै छ। अहिले चीनले5जीको प्रयोग थालिसकेको छ।
विगत गत पन्ध्र वर्षमा चिनियाँ इन्टरनेट र इन्टरनेट अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। इन्टरनेटको विकासमा चीनले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व विकासकै कारण सन् 2014 नोभेम्बर 19 देखि 21 तारिखसम्म चीनको चच्याङ प्रान्तको ऊ चनमा पहिलो विश्व इन्टरनेट सम्मेलनको आयोजना भयो। सो सम्मेलनमा चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले शुभकामना सन्देश पठाउँदै विश्वका विभिन्न मुलुकसँग आपसी सम्मान र विश्वासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गहन पार्नका लागि इन्टरनेटलाई स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न दिने उद्घोष गर्नु भएको थियो। उहाँले इन्टरनेटलाई ह्याकिङबाट जोगाउँदै शान्तिसुरक्षा र खुला तथा सहयोगी इन्टरनेट क्षेत्रको सिर्जना गरेर बहु-पक्षीय, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
चीन सरकारले अनलाइनबाट कुनै पनि उपभोक्ताले समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालका विभिन्न प्रावधानहरु लागू गरेको छ। अनलाइनमाथिको निगरानी र अनुगमनलाई पनि चुस्त बनाएको छ। यति हुँदा हुँदै पनि सन् 2016 को अप्रिलमा एकजना विद्यार्थीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि चीनको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सर्च इन्जिन पाइतु (नेपालीमा उच्चारण बाइदू)ले गरेको एउटा गम्भीर गल्तीले ठूलै हंगामा मच्चिएको छ। यो विषयले चीनभित्र बढिरहेको अनलाइन प्रयोगकर्तालाई सचेत रहन र सरकारले निगरानी बढाउनु पर्ने कुरामा पनि व्यापक दवाव सिर्जना गरेको छ।
के हो पाइतु काण्ड?
चीनको पल्लो शान्षीको प्रान्तको सितियान विश्वविद्यालयमा कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनरत 21 वर्षीय वइ चसीको 2016 को अप्रिल 22 मा मृत्यु भयो। उनको मृत्यु अत्यन्तै थोरै मानिसमा देखिने एक प्रकारको क्यान्सरबाट भएको थियो। उनको मृत्यु स्नोभियल सार्कोमा नामक क्यान्सरबाट भएको थियो। यस्तो क्यान्सर अत्यन्त कम व्यक्तिमा देखापर्छ। चीनका विभिन्न अस्पतालहरुले सन् 2014 को अन्तमै उनको क्यान्सर अन्तिम चरणमा विकास भइसकेकाले अब धेरै बाँच्न नसक्ने भनेर उनलाई मृत्युको समय नजिक आएको बताएका थिए।
मान्छेलाई मर्ने सूचना प्राप्त भएपछि सबैभन्दा ठूलो इच्छा नै बाँच्ने हुन्छ। वइ चसीले पनि त्यस्तो भयानक क्यान्सरबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर खोजी गर्न थाले। कम्प्युटर विज्ञानका विद्यार्थी भएकाले उनले आफूलाई लागेको रोग र निधानका बारेमा इन्टरनेटमा खोजी गर्न थालेँ। उनको आशामाथि पाइतुले उत्साह जगायो। पाइतु चीनमा प्रचलित सबैभन्दा लोकप्रिय इन्टरनेट सर्च इन्जिन हो। यसलाई चीनको गुगल पनि भनिन्छ।
पाइतुमा उनले खोज्दा बेइजिङको एउटा अस्पतालले यसको राम्रो उपचार गर्न संभव भएको देखायो। उनले अस्पतालमा सम्पर्क गर्दा अस्पतालबाट पनि पुष्टि भयो। यो बेइजिङको दोस्रो सैनिक अस्पताल थियो। चीनमा ख्यातिप्राप्त अस्पतालहरु सैनिकद्वारा संचालित छन् र ती अस्पतालको छवि पनि राम्रो रहेको छ। सबैले विश्वास गर्ने र साधन तथा श्रोतबाट पनि सैनिक अस्पतालहरु भरिपूर्ण छन्।
अस्पतालले उनलाई उपचारको लागि सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा बोलायो। उनीमाथि अस्पतालको टिस्यु थेरापी अर्थात् जैजिक थेरापी प्रविधि अपनाएर उपचार सुरु गर्‍यो। टिस्यु थेरापी भनेको क्यान्सर पीडितकै शरीरबाट तन्तु झिकेर क्यान्सरले गालेको भागमा प्रत्यारोपण गर्ने विधि हो। सो अस्पतालमा उनको सात महिना मात्र उपचार भयो। सन् 2016 को अप्रिल 22 मा उनको देहान्त भयो। त्यो सात महिनाको अवधिमा अस्पतालले वइमाथि चारपटक तन्तु थेरापी गर्‍यो र वइका अभिभावकबाट दुई लाख चिनियाँ युआन अर्थात् 33 लाख नेपाली रुपैयाँ बराबर शुल्क असुल्यो।
वइको मृत्यु भइसकेपछि अस्पताल र पाइतुले गरेको गल्ती बाहिर आयो। यसले चिनियाँ अनलाइनलाई कसरी निगरानी गर्ने भन्ने बारेमा ठूलो वहस पैदा गरायो। किनभने यो विषयले दुईवटा प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठायो। एउटा इन्टरनेटको सर्च इन्जिनले गलत जानकारी दिएर आम मानिसलाई ठग्न सक्ने कुरा व्यापक रुपमा पर्दाफास भयो भने अर्कोतिर सेनाद्वारा संचालित अस्पतालले पनि गलत विज्ञापन गरेर व्यापार गरिरहेको र मान्छेको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई सार्वजनिक गर्‍यो। यी दुवै कुराको जड अनलाइन सेवा रहेको पनि पुष्टि भएको छ।
सर्च इन्जिनमा उच्च प्राथमिकतामा आउन र सशुल्क सूचिको अग्रभागमा देखिन प्राय���जन गरिने इन्टरनेटको एउटा बिज्ञापन तरिका हो। यसरी विज्ञापन गर्दा सर्च इन्जिनमा त्यससँग सम्बन्धित विषय खोज्दा हरेकपटकक विज्ञापन देखिन्छ। यसले विज्ञापनदाताबाट सर्च इन्जिनले मोटो रकम असुलेको हुन्छ। पाइतुको मुख्य आम्दानीको श्रोत पनि यही हो। यस्तो विज्ञापनल गुगल सर्च इन्जिनले पनि राखेको हुन्छ। तर गुगलले चाहिँ यो विज्ञापन हो भनेर चिनिने गरी छुट्टै रङमा देखाएको हुन्छ भने पाइतुले त्यसो गरेको छैन। त्यसकारण सर्वसाधारण पैसा तिरेर वेभपेजमा डिसप्ले भएको हो अथवा गुडविलको कारणले हो भनेर छुट्ट्याउन सक्दैनन्। प्रयोगकर्तालाई झुक्याउने गरी पाइतुले दुईवटा साना र खरानी रङका अक्षरबाट विज्ञापन हो भन्ने संकेत गरेको हुन्छ।
वइ चसीले उपचार र अस्पतालको बारेमा पाइतुमा सर्च गरेर पत्ता लगाएका थिए। उनले पाइतुमा रोग र उपारको बारेमा सर्च गर्दा पाइतुले उच्च सूचिबाट सो अस्पताललाई दोस्रो श्रेणीमा राखेको थियो। मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि वइले उपचारसँग सम्बन्धित आफ्ना अनुभव चिहु वेभसाइटमा पोष्ट गरेका थिए। उनले प्रभावबिहिन उपचार पद्धति र पाइतुको प्रायोजक विज्ञापनप्रति कटा आलोचना पनि गरेका थिए।
वइले पोष्ट गरेका थिए 'सन् 2014 मै मलाई अन्य अस्पताले अब धेरै बाच्दैनस् भनेका थिए। किनभने क्यान्सर अन्तिम चरणमा फैलिसकेको थियो।' उनको इम्मिनोथेरापी गर्नका लागि दुई लाख चिनियाँ युआन खर्च भएको थियो। छोरा बाँच्ने आशामा अभिभावकले आफूसँग भएको पैसा नपुगेर साथीभाइ र आफन्तसँग सापटी चलाएका थिए। उनले त्यसअगाडि केमोथेरापी लिएका थिए।
वइको मृत्युपछि जनदवाव तीब्र रुपमा बढ्यो। चीन सरकारले पाइतु र अस्पताल दुवै निकायमाथि छानबिन सुरु गर्‍यो। पाइतुले पनि छानबिन सुरु गर्‍यो र अस्पतालले पनि छानबिन अगाडि बढायो। फलस्वरुप दुई संस्थाबाट गल्ती भएको पुष्टि भएपछि कारवाही प्रकृया अगाडि बढ्यो। यद्यपि वइका अभिभावकले कुनै संस्थालाई मुद्दा नहाल्ने र क्षतिपूर्ति पनि नमाग्ने बताउँदै यस्तो प्रभावविहिन उपचार विधि अरुलाई नथोपरियोस् भनेर चेतना भर्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
छानबिनपछि पत्ता लाग्यो कि जैविक थेरापी प्रणाली अस्पतालभित्रको अङ्ग नै रहेनछ। कुनै एउटा निजी कम्पनीले करारमा त्यस्तो प्रणाली चलाएको रहेछ जुत चीनको स्वास्थ्य तथा अस्पताल ऐनको गम्भीर उलङ्घन पनि हो। यस्तो पत्ता लागिसक्दा सो निकायलाई तुरुन्तै बन्द गरियो।
त्यसो त पाइतुले अरु पनि गल्ती नगरेको होइन्। सन् 2008 को नोभेम्बरमा सीसीटीभीले एउटा सामग्री प्रसारण गरेको थियो। जसमा पाइतुले गलत चिकित्सा व्यापारलाई गलत ढङ्गले प्रसार गरेको उल्लेख थियो। हुँदै नभएको अस्पताल र अनुमति नलिएका मेडिकल आफूर्ति कम्पनीहरुको बारेमा पाइतुले प्रवर्द्धन गरेको तत्कालीन समाचारमा आएको थियो।
संसारको सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेको चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको इज्जत र प्रतिष्ठा चीनमा अत्यन्त लोकप्रिय छ। सन् 1949 मा चिनियाँ जनतालाई मुक्त गराएर जनवादी शासन लागू गराउन चिनियाँ सेनाको भूमिका सर्वोच्च र महत्वपूर्ण रहेको छ। त्यसपछि आधुनिक चीनको विकासमा पनि सेना अहोरात्र खटिरहेको हुन्छ। विशेष गरी चीनमा हुने ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरुमा चिनियाँ सेनाको कामलाई संसारले उच्च प्रशंसा गर्ने गरेको छ। चिनियाँ सेनाले विदेशमा पनि प्राकृतिक प्रकोपको समयमा गरेको उद्दार र सेवाभावले गैर चिनियाँलाई पनि नतमस्तक बनाउने गरेको छ। उदाहरणका लागि सन् 2015 को अप्रिलमा गएको भूकम्पपछि पीडितको उद्दार कार्यमा चिनियाँ सेनाले थुप्रै नेपालीको मन जितेको थियो।
यस्तो विश्वासिलो र ठूलो संस्थाले चलाएको अस्पतालको गरिमा पनि चीनमा उच्च नै रहेको छ। सैनिक नियन्त्रत अस्पतालहरुको सेवा र सुविधा पनि उच्च कोटीको भएकाले सबै सर्वसाधारणले उपचारका लागि त्यस्तै अस्पतालको छनोट गर्दछन्। विशाल चीनमा छरिएर रहेका एक अर्ब 37 करोड चिनियाँले कुन ठाउँमा कस्तो अस्पताल छ र त्यहाँको विशेष सेवा के छ भनेर जान्नका लागि सबैभन्दा भरपर्दो एकमात्र माध्यम इन्टरनेट नै हो। चीनमा हरेक कुराको खोजी गर्नका लागि इन्टरनेट सर्च इन्जिन पाइतु प्रयोग गरिन्छ। नुनदेखि सुनसम्मको जानकारी दिने सर्च इन्जिन पाइतु नै हो। चीनमा गुगलमाथि प्रतिबन्ध लागेकाले पनि सबैले पाइतुमै निर्भर हुनुपरेको छ। सरल तिरकाले बुझ्दा यो चीनमा गुगलजत्तिकै भरपर्दो र लोकप्रिय छ। त्यसकारण कुनै स्वास्थ्य समस्या पर्‍यो भने उनीहरु पहिले पाइतुकै शरणमा पुग्छन्। त्यसमा खोज्दा कहाँ के कस्तो सुविधा छ र कस्तो उपचार हुन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी पाइन्छ।
वइको मृत्युपछि पाइतु र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाद्वारा संचालित अस्पताल दुवैमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ। पाइतुजस्तो ठूलो र लोकप्रिय सर्च इन्जिनले पैसाको लोभमा गलत कुराको विज्ञापन गरेर मानिस झुक्याउन थालेपछि चिनियाँहरु सशंकित हुन थालेका छन्। अर्कोतिर सैनिक अस्पतालले अबैधानिक रुपमा बाहिर कम्पनीलाई अस्पतालभित्र गलत अभ्यास गर्न र व्यापार गर्न छुट दिएपछि बिरामी र आफन्त कहाँ जाने भनेर दुविधामा परेका छन्। बेइजिङ युनियन मेडिकल कलेज अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ कोङ सियोमिङ भन्छन् 'सैनिक अस्पतालहरु स्वास्थ्य प्रशासन प्राधिकरणको अधिनमा नभएकाले यसप्रकारका गल्ती भएका हुन्। धेरैजसो मानिसहरु सैनिक अस्पतालमाथि पूरा विश्वास गर्छन्। उनीहरुलाई यस प्रकारका अनइथिकल कार्य भइरहेका छन् भन्ने कुरा थाहै हुँदैन।'
मृतक वइका बुबा वइ हाइछुआनलाई अस्पतालका डाक्टरले जैविक थेरापी प्रणाली अमेरिकामा विकसित भएको र उपचार प्रभाव उच्च रहेको बताएका थिए भन्ने कुरा बेइजिङ युथ दैनिकले लेखेको छ। तर पछि खोजी गर्दा त्यस्तो कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकले झुक्याएको प्रमाणित भएको छ।
पाइतुले सरकारको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने बताउँदै कम्पनीका उपप्रमुख वाङ छनलाई हटाएको सार्वजनिक गर्‍यो। वाङले व्यावसायिक मर्यादा कायम नगरेको र कम्पनीको शाखलाई धरासायी गर्ने काम गरेको आरोप पाइतुले लगाएको छ। पाइतुले अघिल्लो वर्षदेखि विज्ञापन गर्न आवेदन दिएर बसेका सात हजार 8 सय चिकित्सकीय फर्मको अनुरोधलाई पनि रद्द गरेको जनाएको छ।
जब पाइतु र बेइजिङस्थित दोस्रो सैनिक अस्पतालले गल्ती गरेको कुरा सार्वजनिक भयो तर यसको व्यापक प्रभाव देखियो। समाचार प्रकाशन भएको भोलिपल्टै जैविक थेरापी उपचार गरेका सात भन्दा बढी व्यक्तिहरु क्षतिपूर्ति माग गर्न अस्पताल पुगेका थिए। अस्पताल पुगेका अधिकांशका आफन्तको मृत्यु भइसकेको र केही उपचाररत रहेका थिए। उनीहरुले कम्तिमा 30 हजारदेखि डेढ लाख चिनियाँ युआनसम्म क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए। उनीहरुको मागभित्र जैबिक थेरापीको खर्च, उपचारमा लागेको अन्य खर्च, अस्पतालको शुल्क, जाँदाआउँदाको सवारी भाडा र बेइजिङमा होटल बसाइको खर्च समेत जोडेर माग गरेका थिए।
सांघाइमा रहेको भिकान्पिओ कम्पनीको कारोबार नै रोकियो। सत्र करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको यस कम्पनीले जैविक थेरापीका लागि खोज, अनुसन्धान गर्दै चिकित्सकीय सामग्रीको उत्पादन गर्ने काम गर्दछ। यस्तै प्रकारका अन्य कम्पनीको पनि शेयर बजार तुरुन्तै गिरेको थियो।
बजारमा तीब्र प्रभाव देखिन थालेपछि पाइतुका प्रमुख कार्यकारी ली यान होङले यसको व्यावसायिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेका छन्। चिनियाँ सामाजिक सन्जाल प्रयोग कर्ताहरुले पाइतुले पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। त्यसो त पाइतुसँग एक अर्ब चिनियाँ युआनको क्षतिपूर्ति कोष रहेको छ। स्टक एक्सचेन्जमा 60 अर्ब अमेरिकी डलरको सेयर पुँजी रहेको पाइतुले अहिलेसम्म दुई हजार पाँच सय मुद्दामा पाँच करोड चिनियाँ युआन वितरण गरिसकेको छ।
अनलाइन कपिराइट र क्षतिपूर्ति
सन् 2011 को मार्चमा पचासजना चिनियाँ लेखकहरुले पाइतुले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको हनन गरेकोमा मुद्दा दर्ता गराए। अदालतले पाइतुको गल्ती प्रमाणित गरेपछि पाइतुले माफी माग्दै सन् 2011 को नोभेम्बरमा एक लाख 45 हजार चिनियाँ युआन क्षतिपूर्ति तिर्‍यो। त्यतिबेला पाइतुले बौद्धि सम्पत्तिको कपिराइटमा तिरेको यो सबैभन्दा ठूलो परिमाण थियो। यसले चिनियाँ लेखकहरुको मर्यादा र स्वाभिमानलाई कायम राखेको नजिर बसेको छ।
यसैगरी सन् 2010 मा पाइतुले पाँच लाख 50 हजार चिनायाँ युआन कपिराइट उलङ्घन गरेकोमा सांघाइमा तिरेको थियो। पाइतुले छितिआन डट कमबाट पाँचवटा उपन्यास चोरेको आरोप लागेको थियो। पछि अदालतले पाइतुको गल्ती ठहर्‍याएपछि उसले छितिआन डट कमलाई सो क्षतिपूर्ति तिरेको हो।
पाइतुले चीनको लोकप्रिय भिडियो वेभसाइट युखो डट कमलाई पनि चार लाख 91 हजार क्षतिपूर्ति तिरेको छ। पाइतुले पनि आफ्ना सामग्री अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको भनी छिहो 360 लाई क्षतिपूर्ति भराउनका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पाइतुले सो कम्पनी विरुद्ध दस करोड युआनको क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेको थियो तर अदालतले सात लाख युआन मात्र तिराएको थियो।
जटिल समस्या र नेपाललाई शिक्षा
इन्टरनेटले विश्वलाई सानो गाउँमा परिणत गरेको छ। यसले मानिसका बानी बेहोरालाई पनि परिवर्तन गरेको छ। जीवनस्तर सहज बनाउन र उकास्नका लागि इन्टरनेटको महत्व उच्च छ। उपभोग्य सामग्रीको किनबेचदेखि असीमित मुद्राको कारोबार पनि इन्टरनेटबाटै हुन थालेको छ। इन्टरनेटले मानिसलाई भौगोलिक सीमा पनि बिर्साइ दिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा इन्टरनेटको भूमिका अत्यन्त गहन बनेको छ। तर इन्टरनेटको महिमा यति मात्र छैन। गम्भीर खालका अपराध पनि इन्टरनेटले जन्माउँदै छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा हुने ठूला युद्धहरु पनि इन्‍टरनेको कारणले हुन सक्छन् भनेर भविष्यवाणी गरिएकै छ। इन्टरनेटमाथि हुने आक्रमणले कुनै पनि देशको आर्थिक व्यवस्थालाई क्षणभरमै भताभुङ्ग बनाउन सक्छ। यस्तो जटिल प्रविधिको प्रयोगले मानव जीवनलाई सपार्ने मात्र होइन दुरुपयोग भयो भने नष्ट पनि बनाउँछ।
प्रयोगकर्ताका निम्ति अनलाइन संचार जति सजिलो र सहज छ यसको नियमन गर्न उत्तिकै कठिन र जटिल छ। कुनै भौतिक पूर्वाधार बिना एउटा कम्प्युटर र इन्टरनेटको सहयोगले अनलाइन संचाल चलाउन सकिन्छ। अहिले नेपालमा संचालित कयौँ अनलाइन संचारमाध्यमहरु यही हैसियतमा चलेको कुरा सर्वविदितै छ। थुप्रै अनलाइन संचारमा न त कतै सम्पादकको नाम देखिन्छ न त कार्यालय रहेको ठेगाना नै।
अहिले नेपाली भाषाहरु विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका छन्। उनीहरुले त्यही ठाउँबाट नेपाली भाषामा अनलाइन संचार संचालन गरेका छन्। अब त्यस्ता संचारलाई नेपालका कुनै निकायले अनुगमन गर्ने कि नगर्ने? मुल��क बाहिरबाट संचालित संचारमाध्यमलाई नेपालले कसरी अनुगमन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। देशको राजधानी काठमाडौँबाट संचालन भइरहेका अनलाइनलाई त निगरानी गर्न नसकिरहेको बेला बाहिरबाट संचालनमा आएका नेपाली अनलाइन संचालकहरुलाई कानुनी प्रकृयामा ल्याउन पक्कै पनि खेलाँची छैन।
अनलाइन संचारमाध्यममाथि निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने संविधानप्रदत्त सूचनाको हक तथा अन्य मौलिक हकमाथि प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ भनेर पक्कै पनि भनिएको होइन। तर संचार माध्यम भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो। यसको सानो गल्तीले पनि समाजमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ। त्यसकारण उत्तरदायित्वबहन गराउनका लागि सम्बन्धित अनलाइन सेवाले जिम्मेवारी बोध गर्नैपर्छ। तसर्थ सरकारी निकायले नियम कानुन बनाएर निरानी र अनुगमन गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ पनि। तर सरकारी निकायले पनि नियन्त्रण गर्ने दम्भबाट नभइ जिम्मेवार बनाउने र भूल सुधार गराउँदै व्यवस्थित गराउने मनसाय राख्नुपर्छ।
चीन जस्तो विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको र विशाल मुलुकमा करोडौँ मानिस अनलाइन संचारमाध्यम प्रयोग गर्छन्। समयको विकास र आधुनिकतासँगै यसमा देखिएका जटिलता र बढ्दो अपराधले चीन सरकार गम्भीर बनेको छ। चीनले अनलाइन संचारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि विभिन्न कदम चालेको छ। त्यसकै एउटा उदाहरण हो पाइतु काण्ड। पाइतुले गल्ती स्वीकार गर्नु र क्षतिपूर्ति दिन तत्पर हुनु अवस्य पनि यो क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तसर्थ नेपालले पनि चीनबाट अनलाइन संचारको अनुगमन र निगरानीमा महत्वपूर्ण अनुभव लिन सक्छ।
2. China Pictorial
3. The People Daily
8. Global Times Daily
10. Nepali daily Newspaper (Kantipur, Nagarik, Annapurna Post…)
11. Various Nepali online media (Onlinekhabar, Setopati…)
साभारः संहिता （प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकाशन）असोज 2073